एसिया Archives - Onlinesamaya.com
ओलम्पिक महिला फुटबलको एसिया छनोट खेलमा नेपालले आज बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
कार्तिक २७, काठमाडौं । ओलम्पिक खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनोटमा नेपालले आज अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । थुवुन्ना रंगशाला स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । बंगलादेशलाई पराजित गर्न सके नेपाल ओलम्पिक खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । आज हुने समूह सी […]
श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाद्धारा संसद भंग
कार्तिक २४,श्रीलंका । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले संसद भंग गर्नुभएको छ । पछिल्लो राजनीतिक संकटसंगै राष्ट्रपतिले संसद समेत भंग गरेपछि श्रीलंकाको राजनीतिक वृत्तमा थप हलचल मच्चिएको छ । शुक्रबार मध्य रातीबाटै लागू हुने गरी राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद भंग गर्नुभएको हो । यद्यपी राष्ट्रपतिको यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नसक्ने आंकलन गरिएको छ । श्रीलङकामा संसद […]
साफ यु-१८ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपालले फाइनलमा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
असोज २१, काठमाडौं । साफ यु-१८ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि रक्षाको लागि आज नेपालले फाइनलमा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । भुटानको थिम्पुस्थित चाङलिमिथाङ मैदानमा स्थानीय समय अनुसार ७ बजे खेल सुरु हुनेछ । नेपाली यु-१८ महिला फुटबल टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यको साथ मैदानमा उत्रिदैछ । समूह चरणमा भने नेपाल बंगालदेशसँग पराजित भएको थियो । बंगलादेशसँग समूह […]
साफ च्याम्पियनसिपमा अाज भुटानविरुद्ध खेल्दै नेपाल, नेपाललार्इ जित्नै पर्ने दबाब
भदौ २१, काठमाडौं । नेपाली फुटबलका लागि बिहीबार भुटानविरुद्धको खेल विशेष महत्वपूर्ण छ। साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्यसाथ बंगलादेश पुगेको नेपाली टोली मंगलबार पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएपछि अघिल्लो चरण पुग्ने समीकरण कठिन बनेको छ। त्यसैले पनि बिहीबारको खेल नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। टोलीका लागि भुटानविरुद्धको खेल जति महत्वपूर्ण छ, विराज महर्जनका लागि अझ […]
भारतका पुर्वप्रधानमन्त्री वाजपेयीको आज दिउँसो ४ बजे दिल्ली स्मृती स्थलमा अन्तिम संस्कार गरीने
भदौ १, काठमाडौं । भारतका पुर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको आज दिउँसो ४ बजे दिल्ली स्मृती स्थलमा अन्तिम संस्कार गरीने भएको छ । बिहीबार पाँच बजेर ५ मिनेट जाँदा निधन भएको छ । । अल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा उनको ‘लाईफ सपोर्ट सिष्टम’ मा राखेर विषेश उपचार प्रयास गरिएपनि उनलाई बचाउन सम्भव भएन । निधन […]
साउन २०, काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चौथो पटक नेपाल आउने भएका छन् । भदौ १४ र १५ गते हुने चौँथो विमस्टेक बैठकमा भाग लिन नेपाल आउन लागेका प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा दुई दिन रहने छन् । सो क्रममा उनले गौतमबुद्धको जन्मस्थान लुम्बनी र पोखराको समेत भ्रमण गरी नेपालस्थित भारतीय दूतावास तयारीमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ […]
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तयार, पहिले मोदीलाई त्यसपछि ओलीलाई बुझाइने
असार १७, काठमाडौं । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को अन्तिम बैठकले शनिबार साझा प्रतिवेदन तयार गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। ईपीजीको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा बसेको नवौं बैठकमा साझा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। नेपाल भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै दुई देशबीचका अन्य असमान सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, आवश्यकता अनुसार संशोधन […]
ईपीजीको नवौं बैठक काठमाडौंमा सुरु हुँदै
असार १५, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच रहेका सबै प्रकारका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समुह ईपीजीको नवौं बैठक आज काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । बिहान १० बजे पछि सुरु हुने बैठकले हालसम्म भएका बैठकको प्रगतिलाई दुईपक्षीय साझा प्रतिवेदनको रुप दिदै सरकारलाई बुझाउने निर्णय गर्नेछ । यद्यपि अझै पनि प्रतिवेदनले अन्तिम रुप भने […]
जेठ ३०,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा आगामी असार ५ गते चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका साथ उहाँकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि चीन भ्रमणमा जानुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन […]
आईपीएल क्रिकेटको ११ औं संस्करणको उपाधि चेन्नाई सुपर किंग्सलाई
जेठ १४, काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटको ११ औं संस्करणको उपाधि चेन्नाई सुपर किंग्सले जितेको छ । आइतबार राति भएको फाइनल खेलमा सनराइजर्स हैदरावादलाई ८ विकेटले हराउँदै चेन्नाईले उपाधी चुमेको हो । उपाधिसँगै चेन्नाईले २० करोड भारु पनि पाएको छ । चेन्नाईले आईपीएल उपाधी जितेको यो तेस्रो पटक हो । तेस्रोपटक उपाधि जित्ने […]
भारतको उत्तर प्रदेश र राजस्थानमा आएको आँधीका कारण एक सय १७ को मृत्यु, सय बढी घाइते
वैशाख २१, काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेश र राजस्थानमा आएको धुलो वर्षासहितको आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एक सय १७ पुगेको छ । गत बुधबार राति आएको आँधीका कारण उत्तर प्रदेशमा ७३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८३ जना घाइते भएका छन् । राजस्थानमा ३८ जनाको मृत्यु भएको छ । एक सय बढी घाइते भएका […]
वैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
बैशाख ८, काठमाण्डौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदो मे ११ अर्थात यही वैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी भैरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा मोदी नेपाल आउन लागेका हुन् । मोदी नेपाल उनी त्यहि दिन धार्मिकस्थल जनकपुर जाने तय भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले दाबी गरको छ । मोदीको नेपाल […]
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई एक साताका लागि भारत जाँदै
चैत ३०, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज भारत प्रस्थान गर्ने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज, भारतको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न उनी भारतको बैंगलोर तर्फ जाने भएका हुन् । संयोजक डा. भट्टराईले पार्टीको लुम्बिनी विस्तारित बैठकका निर्णयहरुको बारेमा प्रशिक्षण दिनेछन् । एक सातासम्म भारतमा रहने डा.भट्टराईले त्यसक्रममा भारतमा […]
मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भने चुनावपछि नेपाल आर्थिक समद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्यो
चैत्र २४, नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावपछि नेपाल आर्थिक समद्धिको दिशार्फ अघि बढेको बताएका छन् । भारतीय प्रधनमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले नेपाल चुनावको सम्पन्नतासँगै समृद्धिको दिशामा अघि बढेको बताएका हुन् । आफू नेतृत्वको सरकारको साझा उद्देश्य नै समृद्धि भएको बताउँदै ओलीले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त वातारण भएको पनि […]
नेपालमा लोकतन्त्रको स्वर्णीम अध्याय शुरु – भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
चैत्र २४, नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा लोकतन्त्रको स्वर्णीम अध्याय शुरु भएको भन्दै यसले भारतलाई निकै हर्षित बनाएको बताएका छन् । मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘नेपाल राजनीति इतिहासको नयाँ यूगामा प्रवेश गरेको छ । छिमेकी मित्र देश र विश्वको सवैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको देशको नाताले छिमेकी नेपालको स्वर्णीम अध्यायाको शुभारम्भ हुनु भारतका लागि हर्षको […]
गान्धीको समाधीस्थल राजघाट पुगेर ओलीले गान्धीको प्रेम, सत्य र अहिंसावादी चिन्तनको प्रशंशा गरे
चैत्र २४, नयाँदिल्ली । तीन दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली महात्मा गान्धीको समाधीस्थल राजघाट पुगेर गान्धीको समाधीमा श्रद्धान्जली अर्पण गरेका छन् । भारतीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्दसँगको भेटवार्तापछि ओली गान्धीको समाधिस्थलमा श्रद्धान्जली अर्पण गर्न पुगेका हुन् । श्रद्धान्जली अर्पण गरेपछि राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा ओलीले गान्धीको प्रेम, सत्य र अहिंसावादी चिन्तनको प्रशंशा गरेका छन् […]
प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीबीच आज महत्वपूर्ण भेटवार्ता हुँदै
चैत्र २४, नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपक्षीय सम्वन्धमा आज महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति बैंकया नायडु, समकक्षी नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरुँंग भेटवार्ता गर्न लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा भारत सरकारले गार्ड अफ अनरले सम्मान गरेको छ […]
भारतीय व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
चैत २३, नयाँ दिल्ली । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि बलियो सरकार बनेको र निर्धक्क भएर लगानी गर्न भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। भारत भ्रमणको पहिलो दिन ताज होटलमा आयोजित व्यवसायीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कानुनी शासन बलियो भएको र सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भन्दै […]
२०१४ को नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई पाकिस्तान फर्किइन्
चैत १५, काठमाडौं । पाकिस्तानी महिला शिक्षा तथा बाल अधिकारवादी अभियन्ता एवं सन् २०१४ को नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई पुन: पाकिस्तान फर्किएकी छिन् । सन् २०१२ मा तालिवानी लडाकुको आक्रमणमा परेपछि पहिलोपटक मलाला पाकिस्तान फर्किएकी हुन् । पाकिस्तानको स्वात उपत्यकामा तालिबानी लडाकूले बालिकाहरुलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको समयमा महिला तथा शिक्षाको लागि वकालत गरेको […]
नेपालमा पहिलो पटक अन्तराष्ट्रियस्तरको अंग्रेजी भाषाको प्रशिक्षण केन्द्र एनएलआइसीसी सञ्चालनमा (फोटो फिचर सहित)
चैत ११, काठमाण्डौं । न्यो लिङ्वा इन्टरनेशनल करियर सेन्टर’(एनएलआइसीसी) ले नेपालमा पहिलो पटक अन्तराष्ट्रियस्तरको अंग्रेजी भाषाको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौंको महाराजगंजस्थित महालक्ष्मी अवल हाउसमा “युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नी यु टि एस इन्सर्चको संयुक्त प्रयासमा सुरु गरिएको अंग्रेजी भाषाको प्रशिक्षण केन्द्र संचालनमा ल्याएको हो । काठमाडौँको होटल याक एण्ड यतीमा आयोजित एक बिशेष […]
चैत ११, पटना, भारत । भारतको राष्ट्रिय जनता दलका नेता तथा विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादव चौथौं भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहरिएका छन् । भारतको सिबिआई अदालतले शनिबार यादवलाई १४ वर्षको कारावास सजायका साथै ६० लाख जरिवाना सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अदालतले उनलाई दुम्का कोषबाट गैरकानुनी रुपमा ३ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैया अपचलन गरेको […]
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित
चैत ३, बेइजिङ। चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। चीनको संसदमा शनिबार सीलार्इ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो। चीनको संसदका रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनकंग्रेसको जारी बैठकले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको चिनियाँ सञ्चार माध्यम सिन्ह्वाले जनाएको छ। उनको पक्षमा बैठकमा उपस्थित २९७० जनाले मत हालेका […]
काठमाडौंसम्म भारतीय रेल आउनुपर्छ – भगतसिंह कोस्यारी
फागुन १४, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोस्यारीले ‘काठमाडौँमा भारतीय रेल आउनुपर्छ’ भन्ने अवधारणामा भारत अगाडि बढेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर दुवै मुलुकले विकास र समृद्धिलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)का […]
नेपाल–भारत प्रबुद्व समुहको सातौं बैठक सकियो, १९५० को सन्धी खारेज वा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल
फागुन १३, काठमाडौं । भारत प्रबुद्व समुह (इपिजि) को सातौं बैठक सकिएको छ । शनिवारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको बैठक आज सकिएको हो । बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवुद्ध समूहका नेपाल संयोजक सदस्य डा भेषवहादुर थापाले सबै विषयमा छलफल सकारात्मक रहेको बताए भने भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले १९५० को सन्धिलगायतका सवै बिषयमा सहमतिका […]
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको हृदयघातका कारण दुबईमा निधन
फागुन १३, काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको दुबईमा निधन भएको छ।आफ्नो शानदार अभिनयद्धारा करोडौंको दिलमा बस्न सफल श्रीदेवीको हृदयघातकाको कारण निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। आफ्ना पति बोनी कपुर र कान्छि छोरीसँगै आफन्तको बिहेमा सहभागी हुन श्रीदेवी दुबई गएकी थिइन्। श्रीदेवीले फिल्म ‘जूली’ बाट बाल कलाकारको रुपमा बलिउडमा प्रवेश गरेकी थिइन्। मिस्टर इन्डिया,चालबाज,लम्हे,खुदा गवाह,जुदाई […]
युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको बधाईको ओइरो
माघ १५, काठमाण्डौं । आइतबार इन्डियन प्रिमियर लिग(आइपीएल)मा छनोट भएका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई चिर्चित र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको बधाईको ओइरो लागिरहेको छ । नेपालबाट आईपीएलमा छनोट हुने पहिलो क्रिकेटर बन्न सफल भएका सन्दीपलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बधाई दिएका छन् । सोमबार बिहान फेसबुकमार्फत दाहालले सन्दीपलाई बधाई दिएका हुन् । दाहालले फेसबुकमा लेखेका […]
सन्दीप लामिछाने आईपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी
माघ १४,काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय टोलिका स्पीनर सन्दीप लामिछाने भारतमा हुने ११ औं संस्करणको आइपीएल अक्सनमा छनोट भएका छन् । भारतमा दोस्रो दिन भएको अक्सनमा नेपालका सन्दीप लामिछाने २० लाख भारतीय मूल्यमा दिल्ली डियर्स डेभिल्समा आवद्ध भएका हुन् । दोस्रो दिनको अक्सनमा दिल्लीले ५ सय ७८ खेलाडी रहेको अक्सनको सूचीबाट सन्दीपको नाम लिएको हो । सन्दिप […]
पुस २७, काठमाण्डौं । नेपाल र भारतबीच भएका पुराना सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित दुई देशबीचको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को बैठक बिहीबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु हुँदै छ । ईपीजीको छैटौं बैठकमा सहभागी हुन नेपाली समूह नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । नेपाली समूहका सदस्यमा भेषबहादुर थापा, सूर्यनाथ उपाध्याय, निलाम्बर आचार्य र डा. राजन […]
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफु आतुर– प्रधानमन्त्री देउवा
पुस ११, चितवन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफु आतुर रहेको बताउनुभएको छ । सौराहामा १४ औं चितवन हात्ती महोत्सवको उद्धघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभएको हो । देउवाले भन्नुभयो – लामो संक्रमणकाललाई राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट विश्वास हुने किसिमबाट सम्पन्न गर्दै शाचन्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न […]
मलेसियालाई ७२ रनले पराजित गर्दै नेपाल एसीसी यू-१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश
पुस १, काठमाडौं । प्रतिस जिसीको अलराउण्ड प्रदर्शन तथा सूर्य तामाङको उत्कृष्ट बलिङ मद्दतमा मलेसियालाई ७२ रनले पराजित गर्दै नेपाल थाइल्याण्डमा भइरहेको एसीसी यू-१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले अब उपाधिका लागि सिंगापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।नेपालले दिएको १२८ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया २१.१ ओभरमा ५५ रनमा अलआउट भयो। मलेसियालाई कम स्कोरमा अलआउट […]
निवर्तमान कुमारी मतिना शाक्य पहिलोपटक सार्वजनिक
असोज २९ , काठमाडौं । भर्खरै जीवित देवी कुमारीको जीवन पूरा गरी सर्वसाधारणका रूपमा फर्केकी मतिना शाक्य पहिलोपटक सार्वजनिक भएकी छन् । उनी शाक्य भिन्तुना गुठीद्वारा भोटाहिटीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भएकी हुन् । उनले कार्यक्रममा गुठीबाट निष्कासित चाँदीको सिक्का सार्वजनिक गरिन् । निवर्तमान कुमारी शाक्यको दैनिकी सर्वसाधारण बालिकाको जस्तै बित्दै गएको […]
भुटानी देखि रोहिंगासम्म – कहिले सम्म आफ्नै देशबाट भागेर शरणार्थीको उपनामले बाच्ने
बिनिता सिवाकोटी असोज ६,काठमाडौं। शरणार्थी नाम मै पिडा लुकेको यस शब्दलाई हटाएर कुनै देशको नागरिक बनेर कहिले ढुक्कको सास फेर्ने ? कहिले नागरिकता देखाई आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ? सरकार कहिले बुझ्ने जनताको कहाली लाग्दा दिन र नढलेका रातहरुलाई ? जनता शरणार्थी बन्छन , त्यहि जनता शरणार्थी कहलाउदा देश चाही किन शरणार्थी बन्दैन ? […]
ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेट
भदौ १९,काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी डोकलाम क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान भएपछि पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेट भएको छ । ब्रिक्स सम्मेलनका लागि चीनको सियामेन पुगेका मोदी र सीबीच भेट भएको हो । सीले अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स सेन्टरमा मोदीको स्वागत गरेका थिए । दुवै नेताले हात मिलाउँदै गरेको तस्विर […]
बाबा राम रहिमलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी करार दिँदै १० वर्ष कैदको फैसला
भदौ १२, भारत । भारत र विश्वभर ‘रकस्टार बाबा’का रुपमा परिचित राम रहिमलाई सीबीआईको विशेष अदातलले बलात्कारको मुद्दामा दोषी करार दिँदै १० वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ । उनलाई शुक्रबार सीबीआईको विशेष अदालतले १५ वर्ष अघिको बलात्कार घटनामा दोषी भएको ठहर गरेसँगै अदालत रहेको पञ्चकुला र सिरसामा रहेको उनको आश्रम भएको स्थानमा हिंस्रक प्रदर्शन हुँदा […]
बलात्कारी धर्मगुरु रामरहिम सिंह समर्थक दंगामा कम्तीमा २५ को मृत्यु
भदौ१०,चण्डीगढ (भारत) ।धर्मगुरु रामरहिम सिंहलाई आफ्ना दुई अनुयायीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि चण्डीगढ नजिकै पाँचकुला सहरमा भएको दंगामा कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ। अदालतले शुक्रबार उनलाई दोषी ठहर गरेलगत्तै भारतीय सेनालाई पाँचकुला सहरमा परिचालन गरिएको थियो। ‘डेरा सच सौदा’ सम्प्रदायका नेता रामरहिमलाई प्रहरीले हिरासतमा लिइसकेको छ। उनलाई हेलिकोप्टरमा राखी हरियाणा राज्यको […]
प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको भेटघाट
भदौ ९, नयाँदिल्ली । मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आज राष्ट्रपति भवनमा भारतका प्रमुख राजनीतिक दलका विशिष्ट नेताहरुले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय जनता पार्टीका महामन्त्री राम माधव र सुब्रमण्यम स्वामी, जनता दल युनाइटेडका नेताद्वय केसी त्यागी र शरद यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का नेता सीताराम येचुरी तथा बहुजन […]
नेपालको संविधानबारे भारतको पोजिसन निरन्तर एउटै र स्पष्ट –भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर
भदौ ८, नयाँदिल्ली । भारतले नेपालको संविधानबारे आफ्नो ‘पोजिसन’ निरन्तर एउटै र स्पष्ट रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हैदरावाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दुई चरणको स्थानीय चुनाव भएकामा बधाई दिए । साथै सबैसँग संवाद जारी राख्न र सबैको आकांक्षा समाहित गरी संविधान कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे […]
प्रधानमन्त्री देउवाले मोदी सामु जनाए संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता
भदौ ८, नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय संस्थापन सामु नेपालको संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सामु उनले संसदमा दुई तिहाई नपुग्दा संशोधन प्रयास असफल भए पनि भविष्यमा सो कार्य गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हाम्रा केही मुद्दा सल्टाउन बाँकी छन्’, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार […]
नेपाल र भारतबीच आठ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
भदौ ८, नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतबीच आठ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको हो । त्यसअघि हैदराबाद हाउसमा देउवा र मोदीबीच झण्डै ३० मिनेट कुराकानी भएको थियो । लगतै देउवा र मोदीको उपस्थितिमा द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ ।पुनर्निर्माणसम्बन्धी ४ वटामा […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आकस्मिक भेटवार्ता
भदौ ८, काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पूर्वनिर्धाति समयभन्दा एक दिन अघि आकस्मिक भेटवार्ता गर्नुभएको छ । मोदीसँगको भेटवार्ताका लागि देउवा साँझ पाँच बजे भारतीय प्रधानमन्त्री निवास सेभेन रेशकोर्ष पुग्नुभएको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार सो भेटवार्ता एक्ला एक्लै भएको थियो । भेटवार्तापछि भारतीय […]
पहिलो दक्षिण एशियाली युवा सम्मेलन भारतको उडिसामा हुने
साउन २६,काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा समितिको आयोजनामा पहिलो दक्षिण एशियाली युवा सम्मेलन भारतको उडिसामा हुने भएको छ । समितिले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलोपटक उडिसा राज्यको भुवनेश्वर शहरमा आगामी असोज १ देखि ५ गतेसम्म गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष डा केके सिंहले दक्षिण एशियाका युवासामु उनीहरुले भोग्दै आएका समस्या र त्यसका […]
पाकिस्तानको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा शाहिद खकान अब्बासी चयन
साउन १५, काठमाडौं । पाकिस्तानको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा पूर्व पेट्रोलियम मन्त्री शाहिद खकान अब्बासी चयन हुनु भएको छ । भ्रष्टचारी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई पदच्युत गरेपछि सत्ताढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लिगले अब्बासीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो । प्रधानमन्त्रीका लागि बलिया प्रत्यासी शरिफका भाई साहबाज शरिफले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन नजितेसम्म अब्बासीले अन्तरीम प्रधानमन्त्रीको […]
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ बर्खास्त
साउन १३, काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई बर्खास्त गरेको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा आफ्नो अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरिफलाई पदमा बस्न अयोग्य ठहर गर्दै बर्खास्त गरेको हो । नवाज सरिफले विदेशमा आफ्नो सम्पत्ति लुकाइराखेको र त्यसको स्रोत खुलाउन नसकेका कारण उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर भएको थियो । सर्वोच्च न्यायालयमा रहेका न्यायाधीसहरुले सर्व–सम्मतिले […]
भारतका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दद्वारा शपथ ग्रहण
साउन १०, काठमाडौं । भारतको १४ औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामनाथ कोविन्दले आज शपथ लिनुभएको छ । भारतीय संसदको केन्द्रीय भवनमा आज आयोजित एक विशेष समारोहमा कोविन्दले शपथ लिनुभएको हो । गत विहिबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ७१ बर्षीय कोविन्दलाई प्रधानन्यायाधीश जे.एश खेरले शपथ गराउनुभयो । निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको पदावधी हिजो सकिएपछि कोबिन्द आज सपथ ग्रहण गरी […]
भारतका १४ औं राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविन्द
साउन ५, काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टीका नेता रामनाथ कोविन्दको राष्ट्रपति बन्ने प्रक्रियाले बिहीबार औपचारिकता पाएको छ । उम्मेदवारीकै क्रममा उनको जित पक्का देखिएको थियो र बिहीबार औपचारिक घोषणा भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठवन्धनका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार कोविन्दले ७ लाख २ हजार ४४ अर्थात ६५.३५ प्रतिशत मत पाए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी युपीएकी उम्मेदवार मिरा […]
भारतीय सेनाको टोली र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको टोलीबीच सिक्किमको सिमाक्षेत्रमा कुटाकुट
असार १३, सिक्किम। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको टोली र भारतीय सेनाको टोलीबीच सिक्किमको सिमाक्षेत्रमा कुटाकुट भएको छ । सिक्किम क्षेत्रमा भारततर्फ पसेका चिनियाँ सेनाले भारतीय सैनिकलार्इ कुटपिट गर्दै २ वटा बंकर पनि भत्काइदिएका छन् ।समाचार स्रोतलार्इ उधृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार सिक्किमको डोका ला क्षेत्रमा दुवै देशमा सेना पछिल्लो १० दिनदेखि आमने-सामने रहेका छन् […]
दार्जीलिङ छाड्दै विद्यार्थी,नेपाल-भारत संयुक्त सीमा बैठक हुन सकेन
असार ८, दार्जीलिङ । गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै भारत पश्चिम बंगालको दार्जीलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले शुक्रबार दार्जीलिङका विभिन्न शिक्षण संस्थाका छात्रावासमा बसिरहेका विद्यार्थीलाई घर जान अनुमति दिएको छ । बन्दका कारण दार्जीलिङमा सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्ने भएकाले त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयकै सवारीसाधनले सिलिगुडी तथा सिक्किम राज्यको सिमानासम्म पुर्याउनुपर्ने मोर्चाले उल्लेख गरेको छ । मोर्चाका सचिव विनय तामाङका […]
उज्वेकिस्तानलाई हराउंदै इरान बिश्वकप फुटबलमा छनोट
जेठ ३१,तेहरान । अर्को वर्ष रुसमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलमा इरान छनोट भएको छ । सोमबार राति भएको खेलमा उज्वेकिस्तानलाई २-० गोलले हराउँदै इरान सन् २०१८ को विश्वकपमा छनोट भएको हो । रुस विश्वकपमा छानिने इरान पहिलो एसियाली राष्ट्र पनि बनेको छ । यसैगरी इरानी टोली रुस विश्वकपमा छानिनले दोस्रो टोली हो । यसअघि ब्राजिल […]
भारत पाकिस्तानबीच हुने क्रिकेट ब्यापारिक हिसाबमा पनि अब्बल
जेठ १७,काठमाडौँ । भारत र पाकिस्तानबीच आयोजित क्रिकेटलाई लिएर बिश्वभरी चर्चाको बिषय हुने गरेको छ । यसपालिको च्याम्पियन्स ट्रफीमा पनि यसका केही झलक खेल सुरु हुनभन्दा अगाडि नै देखिन थालेको छ । भारत र पाकिस्तान च्याम्पियन्स ट्रफीअन्तर्गत आउँदो आइतबार मैदानमा उत्रिने भएका छन्। यी दुई देशबीचको खेललाई लिएर अहिलेदेखि नै विश्वव्यापी चासो बढिसकेको छ। अझ व्यापारीक हिसाबले […]
श्रीलङ्कामा बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या १७७ पुग्यो
जेठ १६,काठमाडौँ । श्रीलङ्कामा मनसुन–पूर्वको भीषण वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सोमबार अपरान्ह्सम्म १७७ पुगेको विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। बाढीकाकारण १०९ जना वेपत्ता भएका छन् भने करिव पाँच लाख व्यक्ति विस्थापित भएका छन्।उद्धारका कार्यमा सरकारले करिव एक हजार आठसय सेना, एक हजार एकसय नौसेना तथा विभिन्न सङ्घसंस्थामा कार्यरत सयौं तालिमप्राप्त जनशक्तिको […]
भारतीय लडाकु जहाज चिनको सिमानामा खस्यो, दुई पाइलट बेपत्ता
जेठ १२,काठमाडौा । भारतीय वायु सेनाको एउटा लडाकू जहाज उत्तरी छिमेकी चीनको सिमानामा खसेको छ । तीन दिनअघि चीनको सिमानामा वेपत्ता भएको भारतीय वायुसेनाको फाइटर सुखोई-३० भग्नावाशेष फेला परेको हो । तीन दिनअघि भारत(चीन सिमाना नजिकै इन्डियन एयरफोर्सको सुखोई(३० वेपत्ता भएको थियो ।जहाजको भग्नवाशेष त्यही स्थानमा मिलेको छ जहाँबाट जहाज सम्पकर्कविहीन भएको थियो । । […]
आखिर कस्तो छ त आलिया सिदार्थको सम्बन्ध ?
जेठ ११, काठकाडौँ । सिद्धार्थ मलहोत्रा र आलिया भट्टले आफुहरुको रीलेसनसीपको बारेमा बोल्न चाहादैँनन् तर बलिउडका यी नायक नायिका प्रायस् सँगसँगै देखिने गर्छन् । निर्मातारनिर्देशक करण जौहरले हालै दिएको पार्टीमा आलियाले सिद्धार्थलाई मात्र भेटिनन्, नायकका मम–डयाडसँग पनि भलाकुसारी गरिन् । पार्टी अबेर रातिसम्म चल्यो र आलिया–सिद्धार्थले लामै समय इन्जोय गरे । पापाराजीबाट जोगिन आलिया अलिक […]
आलिया भट्टको चाहाना, रामायण महाकाव्यको सीता बन्ने
जेठ ७,काठमाडौँ । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री आलिया भट्ट रामायणको पात्र सीता बन्न चाहन्छिन् । उनी सीताको यस्तो रोल निभाउन चाहन्छिन् जसको बारेमा मानिसहरु अनभिज्ञ रहेका छन् । भारतीय लेखक अमीश त्रीपाठीको किताब सीता वारियर अफ मिथिलामा को ट्रेलर लन्चमा पुगेकी आलियाले भनिन् “मलाई अमिश बाट नै थाहा भयो रामायणको अर्को रुप पनि छ जसमा सीता […]
उत्तर कोरीयाले फेरी गर्यो मिसाइल टेस्ट
जेठ १,काठमाडौँ । शनिवार गरेको मिसाइल अनुसन्धानमा उत्तर कोरीयाले यो एउटा नयाँ प्रकारको रकेट थियो जुन ठुलो परमाणु वारहेड लिएर जानेमा सक्षम छ । आकाशमा गएको उक्त मिसाइल २००० कि।मी को उचाइ सम्म पुग्न सफल भयो । ७०० किलोमिटर सम्म यात्रा गर्न सफल भएको उक्त मिसाइल जापानको पश्चिमी सागरको किनारामा गएर खसेको थियो । उत्तरकोरीयाले […]
भारतको सर्वोच्च अदालतले बलत्कार गर्ने अपराधीलाई फासी सजाय यथावत राख्यो
बैशाख २२,काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले समुहकृत बलात्कार गरेर मार्र्नेे ४ जना अपराधीलाई फासीको सजाय कायम राखेको छ । ती अपराधीहरुले सन् २०१२ मा एक विद्यार्थीको ग्याङ रेप गरेका थिए । अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता र मुकेस गरेर ४ जनालाई अदालतले सन् २०१३ मा फासीको सजाय सुनाएको थियो । उक्त घटनाले गर्दा भारतमा […]
दक्षिण एसीयाली भू-उपग्रहको औपचारिक सुरुवात आजबाट
बैशाख २२,काठमाडौँ । भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसीयाली भु उपग्रहको औपचारिक सुरुवात शुक्रबारबाट हुने भएको छ । उपग्रहको उपयोग दुरसञ्चार, दैवीप्रकोप, टेलिएजुकेसन, टेलिमेडिसिन र दैवीप्रकोप व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनेछ । भारतीय संचारमाध्यमाका अनुसार आज साझँ ५ बजे यसको औपचारिक सुरुवात हुने भएको छ । यसबाट नेपाल, भुटान, भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले फाइदा लिने […]
अफ्गानिस्ताको आत्मघाती आक्रमणमा परि ८ जनाको मृत्यु
बैशाख २०,काठमाडौँ । अफ्गानिस्तानको राजधानी शहर काबुलमा कम्तिमा पनि ८ जना मानिसहरुको आत्मघाती हमलामा परि ज्यान गएको छ । एक अधिकारीका अनुसार ज्यान गुमाएकाहरु सबै आम नागरिक थिए । घटनामा थप २५ जना मानिस घाइते भएका छन् । घाइते मध्य तिन जना अमेरीकी सेवाका सदस्यहरु रहेका छन् । घटना सैनिकको गाडिहरुलाई लीक्षत गरेर अमेरिकी दुताबासको […]
१५ थान मानव खप्परसहित भारतीय नागरिक झापामा पक्राउ
बैशाख १९,झापा । झापा प्रहरीले भारतीय नागरिकलाई पूर्वी नाका काँकडभिट्टावाट १५ थान मानव खप्परसहित पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले भन्सार चेकपोष्ट नजिकैवाट भारत खोरीवारी गोरसिंहजोतका ६६ वर्षीय भगिरथ सिंहलाई पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी दुर्गाराज रेग्मीले झोला वोकेर नेपाल प्रवेश गरेका सिंहलाई […]
‘बाहुबली-२’ फिल्म रिलिजकै दिन भारतका सबै सिनेमा हल ‘हाउसफुल’
बैशाख १५,काठमाडौँ । बाहुबली २ फिल्म रिलिज शुक्रबार भएको छ । मानिसहर एकदम उत्साही भएका छन् । फिल्मको लागि नेपाल र भारतका मानिसहरुले धेरै समय सम्म कुर्नु परेको थियो । सन् २०१५ मा रीलिज भएको बाहुबली फिल्म सन् २०१६ को अन्त्यमा आउने कुरा थियो तर सन् २०१७ को अप्रिलमा भएको छ । सीनेमाघरहरु खचाखच भरिएका छन् […]
रहेनन् अब बलिउड अभिनेता विनोद खन्ना
बैशाख १४, काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता तथा सांसद विनोद खन्ना को ७० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । भारतको सर एच एन रिलायंस फ़ाउंडेशन अस्पतालको अनुसार विनोद खन्नाले विहान ११ बजेर २० मिनेटमा आफ्नो अन्तीम श्वास फेरेका थिए ।उनलाई क्यान्सर भएको थियो । सन् १९६८ देखि सुनील दत्तको फिल्म मनका मित बाट अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश […]
किङ्स–११ पन्जाबले गुजरात लायन्सलाई २६ रनले हरायो
बैशाख ११, काठमाडौँ । इन्डियन प्रिमियर लिगमा किङ्स–११ पन्जाबले गुजरात लायन्सलाई २६ रनले हराएको छ। यसअघिको खेलमा ओपनर हासिम अमलाले अविजित १ सय ४ रनको योगदान गरे पनि पन्जाब मुम्बई इन्डियन्ससँग ८ विकेटले पराजित भएको थियो। तेस्रो ओभरमा ओपनर मनन बोहरा २ रनमा आउट भएका थिए। तर अमलाले पन्जाबको इनिङ सम्हालेका थिए। म्यान अफ द […]
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आज राजकोट भ्रमण
बैशाख ६,काठमाडौँ । भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यहाँका महत्वपूर्ण भेटघाट र कार्यक्रम सम्पन्न गरी आज गुजरात राज्यको चौथो ठूलो सहर राजकोट प्रस्थान गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रमणको तेस्रो दिन आज त्यहाँस्थित सोमनाथ मन्दिर र अन्य क्षेत्रको अवलोकनका साथै गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री विजय रुपनीले उनको सम्मानमा आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा सहभागिता जनाउनेछिन्। राष्ट्रपति […]
बैशाख ६, नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको लोकतन्त्र सुदृढीकरण र स्थायित्वका लागि भारतको सद्भाव महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । पाँचदिने राजकीय यात्राका क्रममा मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले समकक्षी प्रणव मुखर्जी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको बेग्ला बेग्लै भेटवार्तामा नेपाल(भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति मुखर्जीसँगको भेटमा दुई देशबीच भइरहेका […]
राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा भारतको यमुना उद्यानमा वृक्षरोपण
वैशाख ५, नयाँदिल्ली । मित्र राष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज जगतपुर सडकस्थित यमुना उद्यानमा वृक्षरोपण गरेकी छिन्। कुल ४५७ एकड जमिनमा फैलिएको सो यमुना बायोडायभर्सिटी पार्कमा राष्ट्रपति भण्डारले मौवाको बिरुवा रोपेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीका साथ भ्रमण दलका सदस्य, भारतका महिला तथा बालबालिका मामिला राज्यमन्त्री कृष्णा राज सहभागी थिइन्। […]
‘निर्वाचनमार्फत नेपाल स्थिरतातर्फ जाओस’–भारतीय नेताहरु
भरत केसी,वैशाख ४,नयाँदिल्ली (भारत) । मित्र राष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणमा आज राजधानी आइपुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भारतीय राष्ट्रपति भवनमा भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले भेट गरेको छ ।भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीको औपचारिक निमन्त्रणामा आज अपराह्न यहाँ आइपुगेका राष्ट्रपति भण्डारीसँग नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरवीन्द केजरीवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीका […]
दलाई लामाको भारत भ्रमण, चिनलाई भयो असहज
चैत्र २४, काठमाडौँ । तिब्बती नेता दलाई लामाले भारतको अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गरे लगत्तै भारत चिन सम्बन्ध चिसीन पुगेको छ । चीनले लामाको भारत भ्रमणले दुई देश बिच दरार ल्याउने भ्रमणको संज्ञा दिएको छ । भारते भने यस भ्रमणलाई नियमित भ्रमण भएको र यस विषयलाई ठुलो नबनाउनको लागि सुझाब दिएको छ । भ्रमण पूर्ण रूपमा […]
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहको बैठक आजदेखि काठमाण्डौमा
चैत्र २३,काठमाडौं। नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत अन्य दुईपक्ष सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सुझाव पेस गर्न गठित नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहको बैठक आजदेखि काठमाण्डौ बस्दैछ । विविध कारणबस दुई–दुई पटक स्थगन भएको उक्त बैठकमा भाग लिन भारतका अधिकारीहरु राजधानी आइसक्नुभएको प्रबुद्ध समूहको सचिवालयले जनाएको छ ।
दशगजा क्षेत्रमा भारतले सडक निमार्णको कामलाई तिब्रता दियो
चैत्र २२, काठमाडौँ । दशगजा क्षेत्रको सीमावर्ती भारतीय जिल्ला पिलीभित देखि महराजगन्जसम्म भारतले सडक निमार्णको कामलाई तिब्रता दिएको छ । अवैध कारोबार र आतंकवाद रोक्न मद्दत पुग्ने सोचेर भारत सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको कुरा जानकारीमा आएको हो । सडक निर्माणअन्तर्गत पिलिभितमा ३७, लखिमखिरीमा १ सय २४, बहराइचमा १ सय १८, श्रावास्तीमा ६४, बलरामपुरमा ८४, […]
पाकिस्तानको एक मन्दीरमा २० जनाको हत्या, कयौँ घाइते
चैत्र २०, काठमाडौँ । पाकिस्तानको सारगोधा शहरमा रहेको सुफि भन्ने धार्मिक स्थल नजिकै २० जना मानिसहरुको हत्या गरिएको छ साथै कयौँ घाइते भएका छन् । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तका एक प्रहरीले जानकारी दिए अनुसार मन्दिरका रक्षक अब्दुल वजिदलाई घटनाको विषयलाई लिएर संकाको घेरामा राखिएको छ । उक्त मन्दीर सुफि सन्त र मोहमद अली गुज्जार बाट संचालनमा […]
पाकिस्तानमा आत्मघाती आक्रमण , २२ जनाको मृत्यु ७० घाईते
चैत्र १८, काठमाडौँ । पाकिस्तानको पाराचिनार शहर नजिकै मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमणमा परी २२ जनाको मृत्यु भएको छ साथै ७० जना घाईते भएका छन् ।अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अफ्गानिस्तानसंगको सीमा क्षेत्र पाराचिनार शहर नजिकै मस्जिदमा प्रार्थनाका लागि जम्मा भएका शिया मुसलमान महिलालाई लक्षित गरी विष्फोट गराईएको थियो । विस्फोटको जीम्मा अहिले सम्म कसैले नलिएको कुरा जानकारीमा आएको […]
एसिसी इमर्जिङ कप क्रिकेट, नेपाललाई हङकङले दियो २१५ रनको चुनौती
चैत्र १७, काठमाडौं । एसिसी इमर्जिङ कपको अन्तिम खेलमा नेपाललाई हङकङले २१५ रनको चुनौती दिएको छ। बंगलादेशमा भएको खेलमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। हङकङले ५० ओभरमा अलआउट हुँदै २१४ रन बनाउन सक्यो। खेलको सुरुमा हङकङविरुद्ध नेपाली बलरले दवाब पार्न सकेनन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, भुवन कार्की, सुमन भारी, अविनाश कर्णले दुई(दुई विकेट लिए। सन्दीप […]
टस जितेर नेपाल हङकङविरुद्ध फिल्डिङ गर्दै
चैत्र १७, काठमाडौं । बंगलादेशको कक्स बजारस्थित सेख कमल अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि हङकङले पहिले ब्याटिङ गरेको छ। बंगलादेशमा भइरहेको एसीसी इमर्जिङ कपको समूह चरणबाटै बाहिरिसकेका नेपाल र हङकङबीच अहिले प्रतिष्ठाको लागि खेल भइरहेको छ । पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग ८ विकेटको हार बेहोरेको हङकङ दोस्रो खेलमा पाकिस्तानसँग ४४७ रनको फराकिलो अन्तरले […]
इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा नेपाललाई बंगलादेशले दियो २५८ रनको लक्ष्य
चैत्र १५, काठमाडौं । नेपालले इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा मंगलबार बंगलादेश यू–२३ बाट २५८ रनको लक्ष्य पाएको छ । टस जितेर पहिलो फिल्डिङ रोजेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरको खेलमा बंगलादेशलाई २५७ मा रोक्न सफल भएको हो । नेपाली बलरले बंगलादेशीको ९ विकेट लिएका थिए । नेपालका बलर अभिनाश कर्ण बंगलादेशका प्रारम्भिक ब्याट्स्म्यानलाई सुरुवाती ओभरमै पेभेलियन […]
दलाई लामाले बिगारे भारत र चिनबिचको सम्बन्ध
चैत्र ८, काठमाण्डौं । तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाइ लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिष्ट सेमिनारमा बोलाएपछि चीन र भारतको सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । भारतीय समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रष्ट अफ इन्डियाका अनुसार दलाइ लामालाई बिहारको एक बौद्धिष्ट सेमिनार उद्‌घाटन गर्न बोलाएकोमा आपत्ति जनाएको हो । पीटीआइले चाइना टुडेको हवला दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुङछिङले संवाददाता सँग […]
चाइनाले उत्तर कोरीयालाई परमाणु हतियार प्रक्षेपण नर्गन सल्लाह दियो
फाल्गुन २५, चाइनाका विदेश मन्त्री वाङ इ ले लगातार उत्तर कोरीयालाई रिस उठाउने खालको कदमको सट्टा दक्षिणकोरीया र संयुक्त राज्य अमेरीकाले सैनिक संझौतालाई रोक्दा उचित हुने कुरा बताए । उत्तर कोरीयाले अन्तराष्ट्रीय कानुन तोडेर सोमबार ४ वटा मिसाइलको परिक्षण गरेको थियो जुन जापानको समुद्रमा आएर उक्त देशको आर्थिक क्षेत्र भित्र समेत असर गरेको थियो । […]
दशौं अन्तर्राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी तथा एस्ट्रोफिजिक्स ओलिम्पियाडमा नेपाललाई पदक
पुष ५, काठमाडौं । भारतमा सम्पन्न दशौं अन्तर्राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी तथा एस्ट्रोफिजिक्स ओलिम्पियाडमा नेपाललाई पदक प्राप्त भएको छ। मङ्सिर २४ देखि पुष ४ सम्म सन्चालित प्रतियोगिता भाग लिएको नेपाली टोली पदक सहित पुष ५ गते नेपाल आइपुगेको हो। टोलीका लागि चेल्सी ईन्टरनेशनल एकेडेमीका विजय चन्द्र लुईटेलले ‘अनररी मेन्सन’ पदक जितेका हुन्। उक्त प्रतियोगितमा नेपाल लगायत ४२ देशका २३४ विद्यार्थीले भाग लिएका […]
यु–१९ एसिया कप क्रिकेट – भारतविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल
पुस १,काठमाडौं । उन्नाइस वर्षमुनिको (यु–१९) एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले आज अर्को टेस्ट खेल्ने राष्ट्र भारतको सामना गर्दैछ । कोलम्बो क्रिकेट ग्राउण्डमा भइरहेको खेलमा नेपालले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको छ । हिजो भएको खेलमा श्रीलंकासँग नेपाल जीतको नजिक पुगेर एक रनको झिनो अन्तरले पराजित भएको थियो । श्रीलङ्काले नेपाललाई दिएको २२८ रनको चुनौती […]
संविधान शंशोधन विधेयक नेपालको, बिज्ञप्ती आयो भारतको
मंसिर १९, काठमाडौं । भारतले नेपालको संविधान संशोधनका लागि संसदमा विधेयक पेश हुनुलाई एउटा महत्वपूर्ण कदम भनेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ उधृत गर्दै नेपालस्थित भारतीय दूतवासले संविधान संशोधनको विधेयक आएसँगै सबै पक्ष यसमा समेटिने आशा व्यक्त गरेको छ । दूतावासले यो विधेयक सफलतापूर्वक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । नेपालको एक निकट […]
लुम्बिनीमा विश्वकै ठूलो थान्का आजदेखि प्रदर्शनीमा
मंसिर ११, लुम्बिनी । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वकै ठूलो थान्का आजदेखि प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ । दुई दिनका लागि विश्वकै ठूलो ५० मिटर चौडाइ र ७० मिटर लम्बाइ भएको थान्का प्रदर्शनीका लागि लुम्बिनीमा राखिएको हो । नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ६० वर्ष पूरा गरेको अवसरमा भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वकै ठूलो थान्का प्रदर्शनीका […]
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान–२०१६ आजदेखि सुरु
मंसिर १०, काठमाण्डौं । ‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधारः दिगो विकासका लागि लैङ्कि हिंसारहित समाज’ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान–२०१६ शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । घर घरमा भइरहेको महिला हिंसाविरुद्ध जागरण गराउने उद्देश्यले देशैभर अभियान सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० (मङ्सिर १० देखि २५तिर) […]
बैंकर रविनालाई कोरियामा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
मंसिर ७, काठमाडौ । मेगा बैंकका नायब महाप्रबन्धक रविना देशराज श्रेष्ठले कोरियाबाट प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गर्नुभएको छ । एशिया मेडिकल एस्थेटिक कंग्रेसको अवसरमा उहाँलाई एशिया टप ब्राण्ड मास्टर ग्राण्ड अवार्ड प्रदान गरिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रसँगसँगै देशको आर्थिक विकास, मानवीय तथा सामाजिक कार्यमा विशेष योगदान पुराएका कारण श्रेष्ठलाई अवार्ड प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको […]
नेपाली मजदुर चढेको बस भारतको केरलास्थित नदीमा खस्यो, चार नेपाली बेपत्ता
मंसिर ३, प्यूठान । भारतको केरला एर्णाकुलम जिल्ला र आलापूणा जिल्लाको सिमानामा नेपाली मजदुर सवार यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा चार नेपाली बेपत्ता भएका छन् । एउटै ठाउँमा दिनभरिको काम सकेर बेलुका कम्पनीको गाडीमा फर्कने क्रममा पुलबाट बस नदीमा खसेको थियो । त्यस बसमा आठ नेपाली र सवारीचालक परेको दुर्घटनास्थलमा पुगेका प्यूठान बेलाबास–७ का चेतनारायण घिमिरेले जानकारी […]
‘भारतले नैतिकताका आधारमा नेपालीसँग रहेको भारु साट्नुपर्छ’ –अर्थविद
मंसिर २,काठमाडौं । नेपालीसँग भएको पच्चीस हजार भारुसम्म सटही सुविधाका लागि सरकारले तत्काल भारतीय पक्षसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेमा अर्थविदहरुले जोड दिएका छन् । २५ हजार रुपैयाँ भारु राख्न पाउने व्यवस्था भएकाले उक्त परिमाणको रकम साट्न सरकारले भारतसँग विशेष छलफल गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । मिडिया इन्टरनेसनलले राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद […]
नरेन्द्र मोदीकी आमा भारु साट्न पुगिन् ओरिएन्टल बैंक
कार्तिक ३०, भारत । भारतले पाँच सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नोट सटही गर्नको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकी आमा नै लाइनमा बसेकी छन्। मोदीकी आमा हीराबा मोदी आफै ओरिएन्टल बैकमा लाइनमा बसेर पैसा साटेकी हुन् । उनको आमाले बैकमा पुगेर साढे चार हजार रुपैया फर्म भरेर नयाँ नोट सटही गरेकी हुन्। उनी नोट […]
सुरक्षित मातृत्वका लागि सरकार कटीबद्ध– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र नीधि
कार्तिक २८, काठमाण्डौं । सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र नीधिले सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि देशका ७५ वटै जिल्ला र देशका कुनाकन्धरामा कार्यक्रमहरु लैजानु आवश्यक भएको बताएका छन् । सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री निधीले अलिे वपनि देशैभर सुरक्षित मातृत्वका लागि कार्यक्रमहरु संचालन भईरहेको भएता पनि घरमै […]
भारतबाट कालो धन भित्रिन सक्ने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण
कार्तिक २६, काठमाण्डौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो ५०० र १००० का नोटमा लगाएको प्रतिवन्धपछि नेपालमा पर्ने असरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालीहरुको हितका लागि सरकारले काम गर्नु पर्ने बताएका छन् । साथै कालोधनलाई सेतो बनाउन सक्ने भन्दै सरकार सचेत हुनु पर्नेमा […]
आज एक दिनलाई भारतभर सम्पूर्ण बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु बन्द
कार्तिक २४, नयाँदिल्ली । भारतीय सरकारले चलनचल्तीमा रहेका एक हजार र पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसंगै भारतभर सम्पूर्ण बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु आज एक दिनलाई बन्द भएका छन् । एटीएममा आज सर्वसाधरणले प्रतिव्यक्ति दैनिक दुई हजार र भोली ४ हजार रुपैयाँ मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरुमा तत्काल सरकारी निर्णय अनुसार पुरानो नोट […]
काँग्रेस सभापति देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबिच भेटवार्ता
कार्तिक् २३, नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच भेटवार्ता भएको छ । साउथ ब्लकस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा काँग्रेस सभापति देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसंग भेटवार्ता गर्नु भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले पुष्टि गरेका छन् । भेटवार्ताका क्रममा उहाँहरुबीच नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संविधानमा अन्य पक्षलाई समेट्न […]
देउवालाई जेएनयुको मनार्थ विद्यावारिधि , मनार्थ विद्यावारिधि पाउने देउवा पहिलो दक्षिण एशियाली नेता
कार्तिक २२, काठमाण्डौं । भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु) ले मनार्थ विद्यावाराधिको उपाधि प्रदान गरेको छ। विश्विद्यालयका उपकूलपति जगदीशकुमारले आइतबार एक समारोहबीच सो उपाधि प्रदान गरेका छन्। जेएनयुको मनार्थ विद्यावारिधि पाउने देउवा पहिलो दक्षिण एशियाली नेता हुन् । सभापति देउवाले आइतबारै जेएनयुमा १२ औं नेहरु […]
अष्ट्रेलियाको सर्टिफिकेट फोर ईन कमर्सियल कुकरी कोर्ष अव नेपालमै
कार्तिक २०, काठमाण्डौं । अष्ट्रेलियाको सर्टिफिकेट फोर ईन कमर्सियल कुकरी कोर्ष अव नेपालमै पढ्न पाईने भएको छ ।काठमाण्डौको मैतीदेविमा रहेको प्यासिफिक हस्पीटालीटी एण्ड कलीनरी एकेडेमीले यस कोर्षलाई नेपालमा संचालन गरीरहेको छ । कमर्सीयल कुकरीको महत्व र आवश्यकता बिषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्यासीफिकले कलेज हातामा सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए डाक्टर रामहरी लामिछाने […]
भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी पोखरामा, त्रिभुवन बिमानस्थलबाटै नयाँदिल्ली फर्कने
कार्तिक १९, पोखरा । नेपालको ३ दिने राजकीय भ्रमणको अन्तिम दिन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पोखरा जानु भएको छ । बिहान जनकपुरस्थित रामजानकी मन्दिरमा बिशेष पुजा गरेका मुखर्जी बुद्ध एयरको चाटर्र बिमानबाट सिधै पर्यटकीय नगरी पोखरा जानु भएको हो । पोखरामा उहाँले भारतीय पेन्सन क्याम्पमा आयोजना हुने बिशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उहाँको […]
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान
कार्तिक १९, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । इन्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा सहभागी हुन देउवा शुक्रबार भारत गएका हुन् । देउवा दिल्ली हुँदै शुक्रबार नै गोवा पुग्ने कार्यक्रम छ । गोवामा हुने फाउन्डेसनको कार्यक्रमलाई देउवाले सम्बोधन गर्नेछन् । उनले गोवामा रहँदा स्वामी तेजो महानन्द, रेलमन्त्री सुरेश प्रभु, भाजपाका अध्यक्ष अमित […]
पाकिस्तानको कराँचीमा रेल दुर्घटना , १७ जनाको मृत्यु ४० घाईते
कार्तिक, १८,पाकिस्तान । पाकिस्तानको कराची नजिकै रहेको लान्धी रेलवे स्टेसनमा दुई यात्रुवाहक रेल जुध्दा कम्तिमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम द ड्वनका अनुसार जुमा गोथ र लान्धी रेलवे स्टेसनको बीचमा रोकिराखेको फरदि एक्सप्रेसक नामक रेलमा जाकारिया एक्सप्रेस ठोक्किएको थियो । रेलवे सुपरिटेन्डेन्ट नासिर नजिरका अनुसार […]
बंगलादेशमा हिन्दू धर्मावलम्बीका घर र मन्दिर माथि आक्रमण
कार्तिक १६,ढाका, बंगलादेश । बंगलादेशमा हिन्दू मन्दिर र हिन्दू धर्मावलम्बीका घरहरुमा आक्रमण तथा आगजनी गरिएका छन् ।फेसबुकमा इस्लाम विरोधी पोष्ट गरेको भन्दै आक्रोशित जमातले हिन्दूका घर र मन्दिरलाई निशाना बनाएका हुन् । ब्रह्मणबरिया जिल्लाको नासिरनगरमा रहेका हिन्दू समुदायको घर र मन्दिरमा मुस्लिम समुदायका आक्रोशित भीडले आक्रमण गरेको हो । प्रहरीका अनुसार कम्तिमा २० घरमा आगजनी […]
अपि पावरले पायो सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने अनुमति
कार्तिक १०, काठमाडौं । अपी पावर कम्पनीले विभिन्न ८ आयोजनाबाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको छ । विद्यमान उर्जा संकट निवारण गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष नेपाल विद्युत प्रधिकरणसँग मिलेर ६४ मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न आह्वान गरेको टेन्डर अनुसार सञ्चालन गर्ने अनुमति आइतबार पाएको छ । अपी पावरले ढल्केवरमा १ मेगावाट, […]
कार्तिक १०, काठमाडौं । नजिकँदो तिहार पर्वका लागि यस वर्ष भारतबाट रु ६० लाख मूल्य बराबरको सयपत्री फूलको माला आयात गर्ने योजना छ । गत बर्ष तिहारमा रु। एक लाख ५० हजार माला आयात गरेकोमा यस वर्ष दुई लाख माला आयात गर्ने योजना रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले बताए। तिहारमा सबैभन्दा बढी […]
कार्तिक १०, काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीमा हुन गइरहेको नेपाल– भारत संयक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिताका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आज बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । बैठकमा नेपाल र भारतका उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरु रहने छन् । उक्त आयोगको सचिवस्तरीय बैठक भने आजै नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदैछ । सो प्रयोजनका लागि परराष्ट्र सचिव शङ्करदाश बैरागी हिजो नै नयाँदिल्ली […]
कार्तिक ८, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० को १५ औं साधारणसभाले सोमबार नयाँ अध्यक्ष चयन गर्दैछ । यसका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ ९फिफा० ले २९ कात्तिक, २०७२ मा भ्रष्टाचार अभियोगमा गणेश थापालाई १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निरन्तर २१ वर्ष एन्फामा […]
‘नेपाली सेनाबाट चिनियाँ सेनाले सिक्न चाहेको छ’–रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण
असोज ३०, काठमाण्डौं । विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यमा चीनले सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘सुरक्षा संवाद र सहयोग अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ ढाँचा निर्माण’ सम्बन्धी बेइजिङमा सम्पन्न सातौ सियाङसान सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणले शान्तिस्थापना कार्यमा खटिएर नेपाली सेनाले देखाएको व्यावसायिक […]
गोवामा प्रधानमन्त्री दाहाल, मोदी र सी जिन पिङबीच त्रिपक्षीय बार्ता
असोज ३०,गोवा । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङबीच त्रिपक्षीय भेट बार्ता भएको छ । ब्रिक्स र बिमिस्टेक देशहरुबीचको संयुक्त सम्मेलनको अघिल्लो दिन तीन देशका राष्ट्र र सरकार प्रमूखबीच भेट बार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङबीच २० मिनेट ‘वान […]
महिला विश्वकप क्रिकेट खेल्ने नेपालको सपना सपनामै सिमित
असोज २९, काठमाडौं । सन् २०१६र२०१७ मा इङल्याण्डमा हुने आइसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट खेल्ने नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको सपना चकनाचुर भएको छ।शुक्रबार थाइल्याण्डसँगको महत्वपूर्ण खेलमा पराजय बेहोरेसँगै एसियाबाट विश्व छनौट खेल्ने अवसरबाट नेपाल चुकेको हो। हङकङमा जारी प्रतियोगितामा नेपालले पाँच खेल मध्ये ३ खेलमा हार बेहोरिसकेको छ। राउण्ड रोबिनको आधारमा जारी प्रतियोगितामा नेपालले चीनसँग खेल्न […]
मन्त्री महतद्वारा नेपालको समृद्धिमा सघाउन आग्रह
असोज २३, काठमाण्डौं । परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले विश्वमा नै नेपाली नागरिकको उपस्थिति रहेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरुले ती देशमा आर्जन गरेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न आग्रह गरेका छन् । शनिबार थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा नेपाली दूतावास, गैर आवासीय नेपाली संघ ९ एनआरएनए० थाइल्याण्ड र एआइटी नेपाली […]
भारत विना सार्क सम्मेलनको औचीत्य हुँदैन– परराष्ट्रविद्
असोज १४,काठमाडौं । पररारष्ट्रविदहरुले भारतको सहभागीताबिना सार्क सम्मेलनको अस्थित्व नै नहुने बताएका छन्। उनीहरुले सार्क राष्ट्रको कुनै एक सदस्यले भाग नलिए सम्मेलन नै प्रभावित हुने भएकाले सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक रहेको बताएका हुन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार गरेको साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पराष्ट्र सल्लाहकार डा। ऋषि अधिकारीले भारतविना सार्कको औचित्य नै नहुने […]
पाकिस्तानी नागरीक समाजका सदस्यद्धारा लाहोरमा प्रदर्शन
असोज १४, पाकिस्तान, लाहोर । पाकिस्तान र भारत बिच युद्ध चलीरहँदा पाकिस्तानमा रहेका बिभिन्न नागरीक समाज तथा मानवअधिकारवादी संग संगठनले शान्तिपूर्ण बातावरण निर्माणका लागि लाहोरमा धर्ना दिएका छन् । मानवअधिकारकर्मीह्रुले हातमा प्लेकार्ड बोकी शान्तिपूर्ण रुपमा बार्ताको माध्यमवाट समस्या समाधान गर्न भारत र पाकिस्तान दुबै देश र त्यहाँका प्रधानम्नत्रीलाई आग्रह गरेका छन् । धर्नामा रहेका अधिकारकर्मीह्रुले […]
पाकिस्तान सबै खाले आक्रमणको जवाफ दिन तयार – प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ
असोज १४, इस्लामाबाद, पाकिस्तान । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले आफ्नो देश कुनै पनि खालका आन्तरिक एवं बाह्य खतरासँग जुध्न सक्षम भएको बताएका छन् । सरिफले एक उच्चस्तरीय बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका छन् । बैठकमा सेनाप्रमुख जनरल रहिल सरिफ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नासिर जान्जुआ तथा विदेशसचिव ऐजाज चौधरी सहभागी थिए । पाकिस्तान रेडियोका अनुसार उक्त बैठकमा […]
पाकिस्तान र भारतीय सेनाबीच दोहोरो भिडन्त, ८ भारतीय मारिए
असोज १४, काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा भएको भारतीय र पाकिस्तानी सेनाबीचको दोहोरो भिडन्तमा ८ जना भारतीय सेना मारेको पाकिस्तानी सुरक्षा बलले दाबी गरेको छ । बुधबार मध्यरातदेखि बिहीबार बिहानसम्म पाकिस्तानी भूमिमा छिरेर सैन्य कारबाही गरेका ८ जना भारतीय सैनिकलाई मारेको र एक जनालाई पक्राउ गरेको पाकिस्तानी सुरक्षा बलले दाबी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यहरुले जनाएका छन् […]
नेपाल र भारतको संयूक्त बिज्ञप्तीमा के छ जान्ने की ?
असोज १, नयाँदिल्ली: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै सरकार दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान गर्न सहमत भएका छन् । दुवै देशका सरकार प्रमुखबीचको छलफलपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल– भारतको बहुपक्षीय सहकार्य, निकट र सौहाद्र सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल […]
मोदी र दाहालबिच करीव ५० मिनेट लामो गोप्य भेटवार्ता ,दुई प्रधानमन्त्रीले गरे संयूक्त पत्रकार सम्मेलन
भदौ ३१ , नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । चार दिने भारत भ्रमणमा आएका ‘प्रचण्ड’ले शुक्रवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले हैदरावाद भवनमा नेपाल तथा भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित र मोदीसँग मात्रै छुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन् । दुवै प्रधानमन्त्रीवीच करिव ५० मिनेट […]
दिल्लीमा दाहालको दौडधुप
भदौ ३१, नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजकीय सम्मान प्रदान गरीएमकरीएको छ ।राष्ट्रपति भवनमा बसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शुक्रबार विहान गार्ड अफ अनर प्रदान गरीयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले स्वागत गरेका थिए । चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने […]
परराष्ट्रमन्त्री महत स्वदेश फर्किए
भदौ २८, काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका लागि भारत गएका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन् । आइतबार नयाँ दिल्ली गएका डा. महत मंगलबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका हुन् । स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको भारत स्वागत […]
परराष्ट्रमन्त्री महत र भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराज बिच भेटवार्ता
भदौ २७, काठमाण्डौं । छिमेकी राष्ट्र भारतकाको भ्रमणमा रहनु भएका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुस्मा स्वराज बिच भेटवार्ता भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री महतले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुस्मा स्वराजसँग भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका बिच भेटवार्ता गर्नु भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार नयाँ दिल्ली आइपुगेका उनले परराष्ट्रमन्त्री स्वराजसँग भ्रमणका […]
भारतद्धारा नेपाली अदुवा माथि लगाईएको प्रतिबन्ध फुकुवा
भदौ २४, काठमाण्डौं नेपाली अदुवामाथि गत ११ दिनदेखि भारतले लगाएको प्रतिबन्ध शुक्रबारबाट खुलेको छ। नेपाली अदुवामा विषादीको मात्रा देखिएको भन्दै भारतको खाद्य विभागले नेपाली अदुवाको भारत निर्यातमा रोक लगाएको थियो। तर, नमुना जाँचका लागि भारत लगिएको १० क्विन्टल अदुवामा कुनै विषदी नदेखिएपछि भारतले पुनः निर्यात खुला गरेको हो। नेपाली अदुवाको नमुना परीक्षणका लागि १० क्विन्टल […]
चेलीबेटी बेचबिखन रोक्न दुई देश बिच सम्वन्वय आवश्यक
साउन २८, नयाँदिल्ली भारत । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ईण्डिया ईन्टरनेशनल सेन्टरमा माइती इण्डियाको आयोजनामा मानव बेचबिखन ओसार प्रसार तथा बेचविखनको विषयमा एक दिने गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका एआईजी रेनुका मिश्र, डिआईजी श्रवण कुमार, डिआईजी केएस महि, अजय उन्याल, नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत, काउन्सेलर यादवराज खनाल, द्वितीय सचिव सृजना […]
साफाको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन काठमाण्डौमा
साउन २६, काठमाण्डौं । दक्षिण एसियाली लेखापाल संघ – साफा _ र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्स संस्था -आईक्यान _ को संयुक्त आयोजनामा यही साउन २९ गते काठमाण्डौमा १ दिवसीय अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुका सदस्य संस्थाहरुको सहभागीतामा आयोजना हुन गईरहेको उक्त सम्मेलन लेखाको नैतिक आयामका बिषयमा केन्द्य्रित रहने छ । पछिल्लो समयमयमा […]
नो मोर, नर्सिङका लागी ब्याङ्लोर
दिउसै रात पार्न खोज्ने केहि परामर्श ब्यबसायीहरु मानव तस्करी गर्छन । अरु कुनै व्यबसायमा नबीकेका २ पैसे खुद्रे कन्सल्ट्यान्सीले नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई बिजोग पारे ब्याङ्लोर लगेर । नर्सिङ अध्ययनका लागी त्यहाँ पुगेका बिद्यार्थी त्यतिबेला छागाबाट खसे जस्तो भए तब उनिहरुले पढेको डिग्री त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलले मान्यता नदिने बतायो । ब्याङ्लोरबाट स्थलगत रिपोर्ट गरेका पत्रकार जनक राज […]
बिप्लव चन्द, नेपाल बन्द
श्रावण ८ गते, शुक्रबार, संविधान निर्माण र लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गरेको नेपाल बन्दले देशभरी जनजीवन प्रभावित भएको छ । काठ मान्डौ तथा देशका सबैजसो ठाऊँमा बन्दका कारण मुख्य सडक वरपरका पसल खुलेका छैनन् भने शिक्षण संस्था पनि बन्द रहेका छन् । सहरका भित्री गल्लीका पसलहरु न्युना मात्रामा खुलेका छन् । लामो […]
असारमा धान, साउनमा सम्बिधान भन्छन अध्यक्ष नेम्वाङ
श्रावण ६ गते बुधवार , सम्बिधान बन्ने लगभग निश्चित बनिरहेकै बेला सम्बिधान सभाका अध्यक्ष सुबास नेम्वाङलाई भने बिभिन्न ब्यक्ती, संस्थाहरुले दिने सुझाब सुन्न भ्याइनभ्याइ छ । सुने र बुझे जस्तो गर्ने उनको दैनिकी भएको छ । सुनाउन जानेलाई लाग्दो हो आफ्नो सुझाब शतप्रतिशत लागु हुन्छ र सुने, बुझे जस्तो गर्ने अध्यक्षलाई पनि आउनेलाई किन निराश […]
दुइ देशको दोस्ती, व्हिस्कीको चुस्की
श्रावण ६ गते बुधवार , नेपाल स्थित रसियन दुताबासले आफ्नो राष्ट्रीय दिबस एक भब्य कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ । रसियन दुताबासमा आयोजित कार्यक्रममा राजदुत सेर्गी भी भेलिच्कीन तथा श्रीमती ओल्गा भेलिच्कीनाले संयुक्त रुपमा केक काटी दिबस मनाइएको थियो । रमाइलो पक्ष त के देखिन्थ्यो भने राजदुत दम्पतीले केक काटिरहदा नेपाल सरकारका मुख्य सचिब लीलामणी पौडेल […]